Prince Harry's Apple TV + Series: "The Me You Can't See" Debuts 21 May | Avy amin'ny mac aho
Prince Harry's Apple TV + Series: "The Me You Can't See" Premieres 21 Mey
Nahazo anaram-boninahitra ny andian-dahatsoratra fanadihadiana an'ny TV Apple + Oprah Winfrey sy Prince Harry: "Ilay Me Tsy Hitanao" ary hanomboka premiere amin'ny serivisy streaming an'ny Apple amin'ny 21 may. Nampandrenesina tamin'ny taona 2019 tamin'ny alàlan'ny Instagram ary nahemotra noho ny areti-mandringana, dia toa hitantsika vetivety ihany ny premiereany. Araka ny hitantsika amin'ny afisy fampiroboroboana, dia hanasongadinana kintana mamirapiratra amin'ny lohahevitra tena ilaina izy, indrindra amin'izao vanim-potoana izao.
Ny andiana horonantsary fanadihadiana dia nomanina talohan'ny areti-mandringana vokarin'ny Coronavirus ary noho izany dia voatery nahemotra hatramin'ny manaraka Mey 21th. Daty farany hanaovana ny premiere an'ilay fanadihadiana izay ny printsy fampahalalam-baovao Harry dia mpamokatra miaraka amin'i Oprah Winfrey malaza sy midas. Olana iray izay mampiady hevitra foana nefa tena ilaina tokoa ary hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina dia afaka milaza isika fa efa nisy noho io hatramin'izay. Olona marobe no voararan'ny configurement sy fifandraisana kely eo amin'ny fiaraha-monina.
Apple dia nanamafy ny lohatenin'ity andiany ity tamin'ny Alatsinainy. "Ilay Me Tsy Hitanao". Ilay ahy tsy hitanao Lohateny tena mahomby satria tena ny saina, ny toetra ary ny fahatsapan'ny olona dia iray amin'ireo toetra manokana ananan'ny olombelona. Mahavita ny tsara indrindra nefa koa ny ratsy indrindra. Hanandratra olona ho amin'ny fahombiazana nefa koa hisintona azy ireo any amin'ny helo. Ny fototry ity fanadihadiana ity dia momba ny fomba hamokaran'ny mpampiantrano, Harry sy Oprah, resaka momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fiadanam-po, anisan'izany ny fiainany manokana.
Ahitana karazana vahiny ambony laza hiadian-kevitra momba ny olana ara-pahasalamana, toa an-dry Lady Gaga, Glenn Close, DeMar Rozan an'ny San Antonio Spurs, Langston Galloway an'ny Phoenix Suns, mpiady totohondry Virginia "Ginny" Fuchs, chef Rashad Armstead, ary mpiaro ny fahasalamana ara-tsaina Zack Williams.
Ny famokarana dia nanasongadina ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana 14 sy fikambanana nahazo fankatoavana ary hajaina manerantany. Anisan'izany ny mpandidy jeneraly mpandidy any California sy mpanorina ny Ivotoerana ho an'ny fahasalaman'ny tanora, Dr. Nadine Burke Harris, mpiara-manorina Sangath ary profesora momba ny fahasalamana manerantany ao amin'ny Sekolim-pitsaboana Harvard Dr. Vikram Patel, ary Dr. Bruce Perry, mpikambana zokiolona ao amin'ny Akademia zazatrauma.
Ankehitriny, mihoatra noho ny taloha, dia misy filana eo noho eo soloina fahendrena, fangorahana ary fahamarinana ny henatra manodidina ny fahasalamana ara-tsaina"Hoy i Oprah Winfrey. "Ny tanjonay dia mikendry ny hisarika an'io resaka manerantany io."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Prince Harry's Apple TV + Series: "The Me You Can't See" Premieres 21 Mey
Fihenam-bidy 280 euro amin'ny fividianana MacBook Pro 13 "miaraka amina processeur M1